Sayninyahannada Maraykanka oo sheegay in isbedelka cimiladu halis ku yahay dunida - BBC News Somali
Sayninyahannada Maraykanka oo sheegay in isbedelka cimiladu halis ku yahay dunida
Rajada laga qabo Isbedelka cimilada
Warbixin faahfaahsan oo ay soo saareen saynisyahanno ka tirsan dawladda Maraykanku ayaa waxa lagu soo bandhigay in aad suurto gal u tahay in aadanuhu sabab u yihiin cimilada aduunta ee sii kululaanaysay taas oo cawaaqib xun u keeni doonta Maraykanka iyo dunida inteeda kaleba.
Warbixintan oo cinwaan looga dhigay warbixinta gaarka ah ee ku salaysan baadhitaanka Sayniska ayaa waxa ansixiyey Aqalka Cad in kasta oo ay aad uga duwan tahay aragtida maamulka Trump ka qabo arinta isbedelka cimilada. Warbixin uu soo saaray Aqalka Cad ayuu ku sheegay in uu taageersanyahay in laga doodo baadhitaanka qotada dheer ee sayinisyahannadu sameeyeen.
Warbixintan oo ka kooban qiyaastii 500 oo bog ayaa waxa lagu sheegay in baadhitaankaa lagu ogaaday in marxaladdani tahay tii heer kulka dunigu ugu sareeyey taariikhda casriga ah ee dunida waxaanay intaa ku dartay in ay aad suurto gal u tahay in aadanuhu sabab u yahay, gaar ahaan marka la eego qiiqa ay sii daayaan warshadaha waaweyn oo ah sababta ugu wayn ee kulaylkan horseedday.
Warbixintu waxay intaa ku dartay in aanay jirin caddaymo kale oo lagu qanci karo oo muujinaya in heer kulka dunida wax kale kordhiyaan. Saynisyahannadu waxay saadaaliyeen in dhibaatooyin waawayn oo lagu hoobtaa dhici doonaan. Waxaanay sheegeen in baduhu barriga ku soo durki doonaan qiyaastii 2.4 mitir, sidoo kale waxaanay meesha ka saarin in dabayaaqada qarniga abaaraha iyo daadadku sii kordhig doonaan, isla markaana ay badan doonaan dabka ka kaca kaymaha waaweyn ee dunida iyo sidoo kale duufaanno khaasare badan dhalin doona oo iyaguna badan doona.
Trump ayaa horay ugu hanjabay inuu Maraykanka ka saarayo heshiiska Paris
Madaxweyne Trump oo hore isagu ugu tilmaamay isbedelka cimilada aduunka waxa lagu qoslo ayaa dalkiisa ka saaray heshiis dunidu gaadhay oo la doonayo in wax lagaga qabto arintaas, waxaanu sidoo kale u fududeeyey warshadaha dalkiisu in ay si sahlan u wasakheeyaan cimilada. Kaba sii darane waxa uu jagooyin waawayn oo dawladeed u magacaabay rag lagu yaqaan in ay shaki geliyaan wax kasta oo saynisyahannada dalkaasi sheegaan.
Laakiin cilmi baadhayaashu waxay sheegeen in warbixintoodani aanay la kulmin faro gelin siyaasadeed iyo faafreeeb toona.